Nhau - Stainless simbi mesh inoenderana ruzivo
Isimbi isina waya waya mesh parizvino ndiyo inonyanya kufarirwa, inoshandiswa zvakanyanya, uye hombe simbi waya mesh pamusika. Iyo inowanzo kunzi simbi isina simbi mesh inonyanya kureva simbi isina simbi yakarukwa mesh.
Chekutanga pane zvese, ngatinzwisise simba rezvinhu zvakati wandei musimbi isina chinhu pakuitwa kwesimbi isina chinhu:
1. Chromium (Cr) ndicho chinhu chikuru chinoona kushorwa kwecori nesimbi isina chinhu. Simbi ngura yakakamurwa kuita chemakemikari ngura uye isiri yemakemikari ngura. Panopisa tembiricha, simbi inobata yakanangana nemhepo mumhepo kugadzira oxides (ngura), inova ngura yemakemikari; pane tembiricha yemukati, iyi ngura isiriye chemakemikari ngura. Chromium iri nyore kuumba dense passivation firimu mune iyo oxidizing yepakati. Iyi firimu yepasiti inogadzikana uye yakakwana, uye yakasungwa zvakasimba kune simbi yesimbi, ichiparadzanisa zvachose chigadziko nepakati, nokudaro ichivandudza kusagadzikana kwechuru kweiyo alloy. 11% ndiyo yakadzika muganho wekromium mune isina simbi simbi. Steels ine chromium isingasviki 11% kazhinji haina kunzi isina simbi.
2. Nickel (Ni) chinhu chakanakisa kuita ngura uye chinhu chikuru chinoumba simbi. Mushure mekunge nickel yawedzerwa kune isina simbi, chimiro chinochinja zvakanyanya. Sezvo zvirimo nickel mune isina simbi inowedzera, austenite ichawedzera, uye ngura kuramba, kupisa kwakanyanya kusagadzikana, uye kushanda kwesimbi isimbi kuchawedzera, nokudaro nekuvandudza kutonhora kushanda maitiro kuita kwesimbi. Naizvozvo, simbi isina chinhu ine yakakwirira nickel zvemukati inonyanya kukodzera kudhirowa yakanaka waya uye micro waya.
3. Molybdenum (Mo) inogona kuvandudza kurwisa kwekuora kwesimbi isina tsvina. Kuwedzeredzwa kwemolybdenum kune simbi isina chinhu kunogona kupfuudza pamusoro peiyo simbi isina tsvina, nokudaro nekuenderera mberi nekuvandudza kusagadzikana kwezai kwesimbi isina chinhu. Molybdenum haigone kuumba mvura yesimbi isina chinhu kuti itonhodze molybdenum, nokudaro ichivandudza simba reyakaomeswa yesimbi isina chinhu.
4. Carbon (C) inomiririrwa ne "0" mune isina simbi zvinhu. "0" zvinoreva kuti kabhoni yezvinhu iri pasi kana kuti yakaenzana ne0.09%; "00" zvinoreva kuti kabhoni yezvinhu iri pasi kana kuti yakaenzana ne0.03%. Kuwedzera kabhoni zvemukati kunodzora ngura kuramba kwesimbi isimbi, asi inogona kuwedzera kuomarara kwesimbi isina simbi.
Kune akawanda marudzi easina simbi mamakisi, anosanganisira austenite, ferrite, martensite uye duplex simbi isina simbi. Nekuti austenite ine yakanakisa nzwisisika yekuita, haina-magineti uye ine yakasimba kuomarara uye plastiki, inoshandiswa kune waya mesh kugadzira. Austenitic Stainless simbi ndiyo yakanakisa tambo yesimbi isina waya. Simbi isina chinhu yeAustenitic ine 302 (1Cr8Ni9), 304 (0Cr18Ni9), 304L (00Cr19Ni10), 316 (0Cr17Ni12Mo2), 316L (00Cr17Ni14Mo2), 321 (0Cr18Ni9Ti) nezvimwe zvigadzirwa. Tichitarisa kubva pane zvirimo chromium (Cr), nickel (Ni), uye molybdenum (Mo), 304 uye 304L tambo ine yakanaka kuita kwese uye ngura kuramba, uye parizvino iri waya ine hombe huwandu hwesimbi isina simbi mesh; 316 uye 316L ine nickel yakakwira, uye Iine molybdenum, inonyanya kukodzera kudhirowa mawaya akanaka, uye ine yakanaka ngura kuramba uye kupisa kwakawanda kupisa. Iyo yakakwira-mesh dense-yakakwenenzverwa mesh hakuna imwe kunze kwayo.
Uye zvakare, isu tinofanirwa kuyeuchidza shamwari dze waya mesh inogadzira iyo isina simbi waya ine nguva yekuita. Mushure mekunge yaiswa pakamuri tembiricha kwenguva yakati, iyo yekugadzirisa deformation kusagadzikana yakadzikira, saka iyo isina simbi waya mushure menguva yenguva iri nani kushandisa seyakagadzirwa mesh.
Nekuti iyo isina simbi pajira riya ine hunhu hweasidhi kuramba, alkali nemishonga, yakakwira tembiricha kuramba, tensile simba uye abrasion kuramba, inonyanya kukodzera tupukanana kuongorora uye Sefa pajira riya pasi asidhi uye alkali kwezvakatipoteredza ezvinhu. Semuenzaniso, iyo indasitiri yemafuta inoshandiswa seye dope skrini, iyo chemakemikari fiber indasitiri inoshandiswa seye skrini firita, iyo electroplating indasitiri inoshandiswa seyekunhonga skrini, uye simbi, rabha, aerospace, mauto, mishonga, chikafu uye mamwe maindasitiri. anoshandiswa gasi uye mvura Sefa uye kumwe kuparadzaniswa kwenhau.